Ukukhiqizwa nokuKhangisa kwe Mohair eNingizimu Afrika
Imbuzi ye-Angora igundwa njalo ezinyangeni eziyisithupha. Ukulinganisa ubukhulu bezinyosi buhlukahluka kuye ngokuthi iminyaka yembuzi; izingane ezihamba ngezinyawo zizoba ngu-500g ekuqaleni kokugqoka uma kuqhathaniswa nabantu abadala ababalekayo besisindo esingaba ngu-2 kg. Ngemuva kokugqoka, uboya luhlungwa, lupakishwe futhi lubekwe ngokucacile ngemininingwane yokuxhumana nenombolo yomkhiqizi.
Abalimi be-Angora bezinkomo ezincane bangasebenzisa amaphuzu okugcoba komphakathi kodwa abalimi bezentengiselwano bahlela ngeqembu lokugaya ukuvakashela amapulazi abo ngesikhathi sokugqoka. Ngemuva kokugqoka, i-mohair ihlelwe ngokusho ngobude, amandla nokuthungwa, okupakwe emabhaleni futhi kubhalwe inombolo yenkampani kanye neklasi lekhwalithi.
Umkhiqizi ngamunye wezinkampani ezibhalisayo unenombolo yomkhiqizi. Ibhalansi ngayinye ingaba nesisindo esingama-150 kg. Abalimi abancane kufanele bagcine amarekhodi womnikelo wabo ngabanye kubhalane ukuthi bakhokhele lokho.
Ama-bales athunyelwa kumdayisi, ozothengisa izimpahla ze-mohair futhi azithengise endalini, egcinwe izikhathi ezingaba ngu-14 ngonyaka eMboyeni naseMohair Exchange ePort Elizabeth. Ama-bales azohlukaniswa ngamanani futhi amasampuli yendiza ngayinye izohanjiswa kubathengi. Umthengi uzothenga 'inqwaba' yefiber eluhlaza (ebizwa nangokuthi 'amafutha') futhi azoyisebenzisa ngokuqhubekayo.
Ukucubungula kwe-mohair kubandakanya ukuhlunga, ukushaya (ukugeza), ukukhipha amakhadikhadi, ukuxubha, ukupenda, ukugaya, ukusika noma ukubopha futhi ekugcineni, ukuqedela.
Abathengi baseNingizimu Afrika bakhiqiza cishe ngo-5% ngenkathi ama-mohair angu-95% athengiswa ukuthunyelwa ngaphandle.
Amazwe amathathu aseNingizimu Afrika aphesheya amazwe athumela amazwe aseChina, e-Italy naseTaiwan.
Njengamanje (2018) kunabathengi abayisihlanu abakhulu, abadayisi abathathu nabakhiqizi abangaba ngu-30.
Imikhiqizo eminingi ye-mohair ikhiqizwa eNingizimu Afrika kuhlanganise amasokisi, izingubo zokugcoba, ama-duvets, ama-scarves, kanye nokunye kwezinto zokugqoka nezinto zokuhlobisa. Kwamanye amazwe, i-mohair isetshenziselwa amalebula amashini aphezulu ekukhiqizeni izikhwama zokunethezeka nezinye izinto zefashini.
I-Mohair yaseNingizimu Afrika inikeza ulwazi lwezimakethe kumafama ase-Angora yezimbuzi kanye nemboni.
Izibalo zeMohair eNingizimu Afrika
I-mohair ikhiqizwa ezindaweni ezomile zase-USA nase-Australia naseLesotho, kodwa iNingizimu Afrika ikhiqiza cishe u-53% wemikhiqizo yomhlaba yomhlaba. Inani elibalulekile lokukhiqizwa kwama-mohair kwakungaba ngu-R529 wezigidi ngo-2015. Ukukhiqizwa ngo-2015 (amathani angu-2 500) kwaba ukwehla okukhulu uma kuqhathaniswa nezibalo zokukhiqiza zika-2006 zamathani ayizi-3 700. Umthelela omkhulu kulokhu kunqamuka kwaba nesomiso esinzima esihlangene nendawo enkulu yokukhiqizwa kwesifundazwe saseMpumalanga Kapa. Ngonyaka ka-2006 intengo ye-mohair yayingu-R78 / kg uma kuqhathaniswa no-2018 lapho inani lifinyelela ku-R250 / kg.
Izinkinga Ngokukhiqizwa kwe Mohair
INingizimu Afrika isese (2018) ngaphasi kweengcindezi ezinkulu ezivela ngesomiso ephikelelako emikhawulweni emikhulu yezindawo ezikhiqiza i-mohair. Ezinye izindawo zithole imvula encane kakhulu edingekayo, kodwa abakhiqizi abaningana basasebenzisa imali enkulu kakhulu ekudleni okungeziwe (futhi bayithutha) ukuze balondoloze izilwane zabo.
Kodwa-ke, kusekhona isidingo esihle se-mohair kanye nezimakethe zizinzile emakethe ambalwa adlule.
Ezinye izinselele embonini yaseNingizimu Afrika yezokuhweba zibandakanya ubuningi obanele bempahla eluhlaza ukuze zifike ngesikhathi esifanele, izindleko eziphezulu zokubuyisela imishini, ulwazi olunamkhawulo lwamathenda kanye namakhono kanye nomthetho wokusebenza ongenakulinganiswa ukuze kutholakale isikhathi sokukhiqiza.